‘रत्नपार्क’मा काम गर्दै भिटेन - टि. एल. एन पोस्ट
Home मनोरञ्जन ‘रत्नपार्क’मा काम गर्दै भिटेन
पछिल्लो समय युवापुस्तामाझ चर्चित र्यापर समिर घिसिङ ‘भिटेन’ले ‘रत्नपार्क’ नामक चलचित्र साइन गरेको छन् । बुढासुब्बा ओर्जिनलको ब्यानरमा निर्माण हुन् लागेको उक्त चलचित्रमा भिटेनले काम गर्न लागेको कुरा यो चलचित्रका निर्माता नवराज गिरीले पुष्टी गरेका हुन् ।
भिटेनले चलचित्रका लागि लिएकोे पारिश्रमिक भने अझै खुलाईएको छैन तर, चलचित्र बजारमा भिटेनले ‘रत्नपार्क’का लागि १८ लाख रुपैयाँ लिएको चर्चा छ । नवराजका अनुसार, बुढासुब्बा ओर्जिनलले ७ वटा चलचित्र बनाउनेछ । जसमा एउटा प्रोजेक्ट ‘रत्नपार्क’ पनि हो ।
रौतहटमा जन्मिएका र्यापर भिटेन बारम्बार आफ्नोे गीतका कारण बिबादमा आउने गरेका छन् । उनलाई गीतमा अश्लिल शब्द प्रयोग गरेको भन्दै प्रहरीले पनि पक्राउ गरिसकेको छ । नेपाली चलचित्रमा गायकहरुकोे आगमन भैरहेके समयमा भिटेनले पनि ठूलो पर्दामा प्रवेश गर्न लागेका हुन् ।
Previous articleम्युजिक भिडियोमा साम्राज्ञीको पारिश्रमिक कति ?
Next articleसाहस उर्जाको आईपीओले कति पाउला ओपनिङ्ग रेञ्ज ?
शरदले मसँग बिहेको प्रस्ताव राखे, मैले हुन्छ भनेँः इन्दिरा जोशी
गायिका इन्दिरा जोशीले उनका प्रेमी शरद केडियाले राखेको बिहेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकी छन् । शरदले हेलिकप्टरमा खुम्बु पुगेर इन्दिरालाई इन्गेजमेन्ट औँठी लगाइदिएका हुन् । फिल्मी...
सबैभन्दा छिटो करोड क्लवमा पुग्ने नेपाली गीत बन्यो विष्णु माझीको ‘चरी जेलैमा’